Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. यस्तो छ उपनिर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम – Emountain TV
यस्तो छ उपनिर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम
काठमाडौं, १६ मंसिर । गत शनिबार सम्पन्न उपनिर्वाचन भएका ५२ स्थानको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ ।
पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार दाङ क्षेत्र नम्बर ३ (ख) बाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा उम्मेदवार विमला खत्री प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ । २४ हजार २ सय ८६ मत प्राप्त गर्दै वली प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको हो । निकटतम प्रतिदन्वदी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार केशवराज आचार्यले १९ हजार १ सय ८२ मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।
त्यस्तै बागलुङ क्षेत्र नं २ (ख) प्रदेशसभा सदस्यमा वाम गठबन्धनका खिमविक्रम शाही विजयी हुनुभएको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको समर्थनमा शाहीले नेपाली कांग्रेसका जीत शेरचनलाई दुई हजार ९७ मतान्तरले पराजित गर्दै विजयी हुनुभएको हो ।
यता धरान उपमहानगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेस विजयी भएको छ । वडा नम्बर ७ को मात्र मत गणनामा १ मतको अन्तर देखिएपछि विवाद देखिएपनि सम्रग उपमहानगरमा कांग्रेस विजयी भएको हो ।
कांग्रेसका तिलक राईले २६ हजार ७ सय ९ मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रकाश राईले २३ हजार ९ सय १४ मत प्राप्त गर्नुभएको छ । बाँकी निर्वाचन परिणाम आइतवार नै सार्वजनिक भैसकेको छ ।
शनिवार सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य १,प्रदेश सभा सदस्य ३, उपमाहनगर प्रमुख १,गाँउपालिक प्रमुख ३,उपप्रमुख १ र ४३ वडा अक्ष्यक्ष गरी ५२ स्थानका लागि उपनिर्वाचन भएको थियो ।